Wararka Maanta: Jimco, Mar 22, 2013-Maydadka Dhallinyaro Toogasho lagu dilay oo laga helay Duleedka Magaalada Balad-Xaawo ee Gobolka Gedo
Dilka labadan qof ayaa la sheegay inuu dhacay xalay, iyadoo lagu dilay meel laga qodo dhagaxda guryaha lagu dhisto oo ku taalla koonfurta degmada, waxaana jidkooda ka muuqatay rasaas fara badan oo lagu dilay.
Goobjoogayaal ayaa sheegay in labada ruux ay ka mid ahaayeen dadka deegaanka, iyagoo sheegay inaan la ogeyn cid wadatay iyo sababta loo dilay intaba, iyadoo falkan uu cabsi weyn geliyay dadka ku nool degmadaas oo ku dhow soohdinta ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya.
“Waxaa socda howlo baaritaanno ah oo lagu raadinayo ciddii falkaan fulisay, markii aan xaqiiqsanno ayaana warbaahinta u soo bandhigi doonnaa,” ayuu yiri taliyaha ciidamada ammaanka ee Balad-xaawo, Cabeey oo si kooban ula hadlay warbaahinta.
Degmada Balad-xaawo ayaa waxay ka mid tahay degmooyinka ay ciidamada dowladdu gacanta ku hayaan, iyadoo falalkan oo kale ay dhowr jeer horay uga dhaceen, kuwaasoo ay siyaabo kala duwan u geysteen dhinacyada isku haya gacan ku haynta degmadaas.
Xarakada Al-shabaab oo lagu eedeeyay inta badan falalkii horay uga dhacay degmadaas ayaan weli ka hadlin falkan, iyadoo saraakiisha dowladda ee ku sugan degmaadaas ay ku eedeeyeen Al-shabaab.